भोलि नेपालबाट कतार एयरवेजको चार्टड विमान उड्ने, दोहा हुँदै अमेरिका आउन सकिने « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
भोलि नेपालबाट कतार एयरवेजको जहाज उड्ने भएको छ । यो उडानका लागि प्रेसिडेन्ट ट्राभलले व्यवस्था मिलाएको हो । यो उडानमार्फत कतारको दोहा आएर त्यहाँबाट अमेरिका आउनसकिने सम्भावना रहेको छ ।
यो उडानमार्फत ग्रिनकार्ड भएका अमेरिका आउन चाहने केही नेपालीहरु अमेरिका आउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै यो उडानमार्फत नेपालमा अड्केका केही अमेरिकी नागरिकहरुपनि अमेरिका आउने अपेक्षा गरिएको छ । यो चार्टड फ्लाइट नेपालबाट दोहासम्मका लागि तय गरिएको छ भने दोहाबाट नियमित उडानमार्फत नै अमेरिका आउन सकिनेछ ।
तत्कालका लागि मे २४ को कतार एयरवेजको चार्टड फ्लाइटमात्र नेपालमा रहेका ग्रिनकार्डवाहक र अमेरिकी नागरिकहरु अमेरिका आउनसक्ने फ्लाइट रहेको अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले जनाएको छ । अरु उडानहरु चार्टड गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको र त्यसका लागि सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
अमेरिकी सरकारले यसअगाडि नेपालबाट दुईवटा चार्टड विमानमार्फत आफ्ना सयौं नागरिकहरु अमेरिका ल्याइसकेको छ । तत्कालका लागि अमेरिकी दूतावासले कुनै फ्लाइड चार्टड नगरेको र कसैले अमेरिकी दूतावासको स्पोन्सर रहेको बताएमा त्यो दूतावासको अनुमति बेगर रहेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ ।
भोलिको उडानमार्फत अमेरिका आउन चाहनेले २५ सय डलरसम्म तिनुपर्ने हुनसक्ने अमेरिका आउने योजनामा रहेका एकजनाले खसोखासलाई बताएका छन् । यो उडानका लागि टिकट लगायतको व्यवस्था प्रेसिडेन्ट ट्राभलले नै गरेको छ । दूतावासको कुनै सहभागिता छैन ।
तपाईले बेरोजगारी विमा रकमको निर्धारकपत्र ढिलो पाउनुभयो ? अब के गर्ने ?
तपाईले बेरोजगारी विमा रकमका लागि आवेदन दिइसकेपछि तपाईलाई राज्यको डिपार्टमेन्ट अफ लेवरले रकम निर्धारण गरेको
अमेरिकी सरकारको कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको सामना गर्न अधिकांश करदाता र कैयन कर तिर्न